I-First Shopping Mall eMelika
Izikhululo ziqokelela izitolo ezizimeleyo zentengiso kunye neenkonzo ezakhiweyo, ezakhiwe zigcinwe yinkampani yolawulo. Abasebenzi bangabandakanya iindawo zokutyela, iibhanki, iithala, iiofisi zengcali kunye nezikhululo zesevisi. I-Southdale Centre e-Edina, eNigeria yaba yindawo yokuqala yokuthengisa i-mall ukuvula ngo-1956 kwaye kuye kwavela ezintsha izinto ezintsha ukususela ekuthengeni izinto ezilula kwaye zisebenze ngokufanelekileyo kubanini bovimba kunye nabathengi.
I-First Store Stores
I-Bloomingdale yasungulwa ngowe-1872 ngabazalwana ababini ogama linguLyman noJoseph Bloomingdale. Ivenkile yakhwela ukuthandwa kwengubo ye-hoop ibe yimpumelelo enkulu kwaye yenzelwe isiseko senkonzo yesitolo ekuqaleni kwekhulu lama-20.
UJohan Wanamaker wanyuka emva nje kokuvulwa kwe "Grand Depot," ivenkile yesebe yesigane esineenxa zonke ezintandathu eFiladelphia ngo-1877. Nangona uWamaker wenqabile ngokuthobela ukuthatha ikhredithi ngokuthi "uqokelele" ivenkile yesebe, ivenkile yakhe yayinqabileyo. Izinto zakhe ezintsha zazibandakanya ukuthengiswa kokumhlophe kokuqala, iithegi zamanani zanamhlanje kunye neyokuqala yokugcina ivenkile. Wayenguvulindlela wokusetyenziswa kwemali yokubuyisela imali kunye neentengiso zephephandaba ukuvakalisa iimpahla zakhe zokuthengisa.
Kodwa ngaphambi kweBloomingdale kunye ne-Grand Depot, inkokheli kaMormon uBrigham Young wasungula iSizwe soBumbiswano lweZizwe eziManyeneyo eSalt Lake City ngo-1868. Eyaziwayo ngokuziwayo njengeZMCI, ezinye iimbali-mlando zithengisa ivenkile ye-Young kunye neyokugcina ivenkile yesebe, nangona ininzi inika isikweletu kuJohn Wanamaker.
I-ZCMI ithengisa iimpahla, izinto ezinomileyo, iziyobisi, ukutya, iimveliso, izicathulo, iinqwelo, imishini yokuthunga, iinqwelo kunye noomatshini abathengiswa kwaye bahlelwe kuzo zonke iintlobo "zamasebe."
Iikhowudi zeeNcwadi zoMyalelo zifika
U-Aaron Montgomery Ward wathumela ikhathalogu yokuqala yokuposa i-mail ngo-1872 kwi-Ward yakhe ye-Ward shishini. Idibano yokuqala isebenza kwisebe leMarshall Field njengobhala beevenkile kunye nomthengisi ohambahambayo.
Njengomthengisi ohambahambayo, waqonda ukuba abathengi bakhe basemaphandleni babeya kulungiswa kangcono nge-mail order, eyaba yingcamango yenguqu.
Waqala iMontgomery Ward nge-$ 2,400 kuphela. I-"ikhathalogu" yokuqala kwakukho iphepha elilodwa elinamanani athengisa iirhweba ezithengiswa kunye nemiyalelo yokuyalela. Ukusuka kwesi siqalo esithobekileyo, sakhula kwaye saba nemifanekiso ebuninzi kwaye yahlutha impahla epheleleyo, ifumana isiteketiso "incwadi yokuphupha." I-Montgomery Ward yayingumsebenzi we-mail-oda kuphela ukuya ngowe-1926 xa ivenkile yokuqala yokuthengisa ivuliwe e-Plymouth, e-Indiana.
Iintengiso zokuQala zokuQala
USylvan Goldman wasungula inqwelo yokuqala yokuthenga ngowe-1936. Wayenomtya we-Oklahoma City yokuthenga ukutya okubizwa ngokuba ngu-Standard / Piggly-Wiggly. Wadala inqwelo yakhe yokuqala ngokufaka iibhasiki ezimbini zamahashe kunye namavili ukuya kwisihlalo sokunyathela. Ngomnye umatshini wakhe uFred Young, uGolmanman kamva wakha inqwelo yokuthenga yezithuthi ngo-1947 waza wenza i-Folding Carrier Inkampani ukuba yenze.
U-Orla Watson waseKansas City, eMissouri uvakaliswa ngokuqulunqa inqwelo ye-telescoping yenqwelo yokuthenga ngo-1946. Ukusebenzisa iibhasikiti ezinamathengi, nganye inqwelo yokuthenga yayifakwe kwinqwelo yokuthenga phambi kwayo. Ezi zithuthi ze-telescoping zaqala ukusetyenziswa kwi-Super Market kwi-Floyd Day ngo-1947.
Umqambi we-Silicon Valley uGeorge Cokely, oye waqulunqa i-Pet Rock , weza nesisombululo samanje kwiinkalo ezindala kunazo zonke zezo shishino: ezibiweyo zokuthenga izithuthi. Kubizwa ngokuba yi-Stop Z-Cart. Ivili leenqwelo zokuthenga ligcina isixhobo esine-chip kunye ne-electronics. Xa inqwelo igqithwe umgama othile kude nevenkile, ivenkile iyazi malunga nayo.
IiRejista zokuQala iiCash
UJames Ritty wasungula "i-cashashi engonakaliyo" ngowe-1884 emva kokufumana i-patent ngo-1883. Yayiye yokuqala irejista yemali yokubhalisa. Ukuveliswa kwakhe kwafika kunye nesandi esilumkileyo esichazwe kwintengiso "njengentsimbi evezwe kwihlabathi."
Irejista yemali ekuqaleni yayithengiswa yiNational Manufacturing Company. Emva kokufunda inkcazo yalo, uJohn H. Patterson wanquma ngokukhawuleza ukuba athenge zombini ne-patent.
Waqamba iqela i-National Cash Register Inkampani ngo-1884. I-Patterson yaphucula irejista ngokufaka iphepha lokubhala iphepha lokurekhoda. UCharles F. Kettering kamva wakha irejista yemali ngeenjini zombane ngo-1906 ngelixa wayesebenza kwiNkampani yeNkcazo yeNkcazo kaZwelonke.
Ukuthengwa Kuhamba I-Tech Tech
I-Philadelphia yekhemisti ogama linguAsa Candler wasungula isigqebhezana ngo-1895. U-Candler wathenga iCoca-Cola kwi-inventor yasekuqaleni uDkt. John Pemberton, i-pharmacy yase-Atlanta. I-Candler ibeke amakhuphoni kumaphephancwadi kwi-Cokes yamahhala kwiphina umthombo ukunceda ukuphucula isiphuzo esitsha esithambileyo. Kwiminyaka emininzi kamva, i-patent yekhowudi ye- bar - i-US Patent # 2,612,994-yakhutshwe kubaqulunqi uJoseph Woodland no-Bernard Silver ngo-Oktobha 7, 1952.
Konke oko bekuya kuba yinto engento, nantoni na, ukuba abantu abanako ukungena ngaphakathi ukuthenga. Ngoko i-credit iya ku-Horton Automatics 'abasunguli beeDee Horton noLe Lew Hewitt ukuze baqulunqe umnyango ohamba ngokuzenzekelayo ngo-1954. I nkampani yaphuhlisa kwaye yathengisa umnyango eMelika ngowe-1960. NjengoHorton Automatic ichaza kwiwebhusayithi yayo:
"Le ngcamango yafika kuLe Lew Hewitt noDee Horton ukwakha umnyango ohamba ngokuzenzekelayo emva kwee-1950 xa bebona ukuba iingcango ezikhoyo zikhona kunzima ukusebenza kwimimoya yaseCorpus Christi. iyakunqanda ingxaki yemimoya ephezulu kunye neempembelelo zayo. UHorton Automatics Inc. yakhiwa ngowama-1960, ibeka umnyango wokuqala wokuzithengisa ngokuthe ngqo kwintengiso kwaye ngokuqinisekileyo imisa imboni entsha. "
Umnyango wokuqala wokuzenzekelayo osebenzayo wawuyunithi eyanikezelwa kwiSixeko saseCorpus Christi kwisebe layo leenkonzo ze-Shoreline Drive. Eyokuqala eyathengiswayo ifakwe kwiDellcoll yeDalali yeHlabathi yokuTya.
Konke oku kuya kubeka isiteji se-megamalls. I-megamalls enkulu ayiphumelelwanga kude kube ngama-1980 xa iWest Edmonton Mall ivuliwe e-Alberta, eCanada enezithuba ezingaphezu kwama-800 ezitolo. Kwavulelekile kuluntu ngo-1981 kwaye kwavezwa ihotele, ipaki yokuzonwabisa, iklasi yegalufa elincinane, icawa, ipaki yamanzi yokwenza i-sunbathing ne-surf, i-zoo kunye ne-438-foot-lake.
Imbali yeMpendulo yamashishini
Buyela Ngethuba Ngee-1980s Ixesha lexesha lomlando
UCharles Darwin Webquest
Ukukhuphaza Ingxaki Yomntu Wonke
Yintoni esinokuyifunda kwiiNkokeli zamaKristu eziwa phantsi?